कला / साहित्य Archives - Vishwa News
यस वर्षको मदन पुरस्कार चन्द्रप्रकाश बानियाँको उपन्यास ‘महारानी’लाईकाठमाडौं । यस वर्षको मदन पुरस्कार चन्द्रप्रकाश बानियाँको उपन्यास महारानीलाई दिइने भएको छ। मदन पुरस्कार गुठीको साधारण सभा बैठकले वर्ष २०७६ को मदन पुरस्कार बानियाँ र जगदम्बा(श्री शान्ति ठटाललाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको
काठमाडौं । अब निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा संचालन गरेवापत शुल्क लिन पाउने भएका छन् । सरकारले यसका लागि कानूनी व्यवस्थाबाटै प्रावधान गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले मन्त्रस्तरीय निर्णयबाट शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका छन् ।
प्रेमकृष्ण श्रेष्ठ, कीर्तिपुर "मेरो जीवन निकै छोटो छ । मलाई थाहा छैन म अब कति दिन बाँच्नेछु । जति दिन बाँच्नेछु, म तपाईकै अँगालोमा बाँच्न चाहन्छु" । यति बोल्दै निशाले मलाई बेसरी अँगालो मारिन् । मेरो छातिमा आफ्नो टाउको लुकाएर
न्युयोर्क, सेप्टेम्बर ५, २०२० कोरोना महामारीबाट केही राहत महसुस गरेसँगै न्युयोर्क सहरमा सशरीर उपस्थित भई गरिने केही सामुहिक कार्यक्रम हुन थालेको छ । यसै बीच तारा - किशन फाउण्डेसनले आज आइतबार राष्ट्रकवि स्व. माधवप्रसाद घिमिरेको सम्झनामा 'नेपाली रचना वाचन' नामक
जंगली राजा घाेषित सुंगुरकाे व्यथा
सुपेन्द्र बस्नेत, बोष्टन एक दिन जंगलकाे राजा सिंह शिकार खाएर टन्न भएपछि खुल्ला चाैरमा घाम ताप्दै सुतेर आराम गरिरहेकाे थियाे । त्यही बाटाे हुँदै एउटा सुंगुर आफुलाई सारै मन पर्ने स्थानमा लडिबुडी गरेर रमाइलाे मान्दै आफ्नाे वासस्थान फर्कदै थियाे ।
काठमाडौं । आजबाट पितृ पक्ष शुरु हुँदैछ । दिवंगत पितृका नाममा तर्पण, सिदादान र पिण्डदान को काम आजबाट १६ दिनसम्म जारी रहनेछ । प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सोह्रश्राद्ध प्रारम्भ हुन्छ । आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका सोह्रवटा तिथिमा
शैक्षिक गतिविधि थप १५ दिन प्रतिवन्ध
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लगाएको शैक्षिक गतिविधि माथिको प्रतिवन्ध थप १५ दिन लम्ब्याएको छ । यसअघि १६ भदौबाट संचालनको योजना बनाइएका गतिविधिहरुलाई भदौ मसान्तसम्म सारिएको हो । अब कोरोना भाइरसका कारण स्थगित परीक्षा भदौ
लिदी पहिरोमा अविभावक गुमाएका बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउने कांग्रेस नेता बस्नेतको घोषणा
काठमाडौं । कांग्रेस नेता तथा केन्द्रिय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेतले सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिकास्थित लिदी पहिरोमा परी अविभावक गुमाएका बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पढाउने घोषणा गरेका छन् । उनले बालबालिकालाई काठमाडौंमा आवासीय सुविधासहित पठनपाठनको जिम्मा आफुले लिने घोषणा गरेका हुन्
काठमाडौं । भाद्र कुशे औंसी, आज बुबाको मुख हेर्ने दिनका रुपमा जन्म दिने बुबालाई सम्मान प्रकट गर्दै मनाइदैछ । यो दिन बुवालाई मिठो परिकार खुवाउने, उपहार प्रदान गर्ने र बुबाबाट आशिर्वाद लिने गरिन्छ । यो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण
राष्ट्रकवि घिमिरेको आज अन्त्येष्टी
काठमाडौं । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको राष्ट्रिय सम्मानसहित आज अन्त्येष्टि हुने भएको छ । आज उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले घिमिरेको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा ओडाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । बिहान १० बजेबाट राष्ट्रकविलाई श्रद्धान्जली दिने कार्यक्रम प्रारम्भ हुनेछ । राष्ट्रकवि घिमिरेको
काठमाडौं । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको निधन भएको छ। राष्ट्रकवि घिमिरेको १०१ वर्षका उमेरमा मंगलबार साँझ लैनचौरस्थित निवासमा निधन भएको हो। गत असोजमा १०१ वर्ष पूरा भएर १०२ वर्ष लागेका थिए । वि.सं. १९७६ असोज ७ गते जन्मिएका घिमिरे स्वच्छन्दतावादी भावधारा
August 18, 2020 विस्तृतमा »
काठमाडौं । नेपालका स्कुल, पठनपाठन र नयाँ भर्नाको काम थप एक महिना पर धकेलिएको छ । कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका बीच नेपालमा असोजबाट मात्र शैक्षिक गतिविधि शुरु गर्ने तयारी गरिएको हो । आइतबार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले विद्यार्थी
काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको भगवान गौतमबुद्ध बारेको विवादास्पद अभिव्यक्तिको खण्डन गरेको छ । सरकारले भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमिबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा कुनै बहस र विवाद नरहेको प्रष्ट पारेको हो । यसअघि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले